यस्ता हुन्छन महिलाले थाहा नपाउने पुरुषका कुरा ? [जानकारीका लागि सेयर गरौं] - E ALL NEPAL
यस्ता हुन्छन महिलाले थाहा नपाउने पुरुषका कुरा ? [जानकारीका लागि सेयर गरौं]
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेदजस्तो गम्भिर प्रकारको समस्या विकराल बन्दैं गइरहेको छ । सम्बन्धमा दरार आउँनुमा महिला पुरुष दुवैं उत्तिकैं जिम्मेवार हुन्छन । विशेष गरेर महिलाहरू पुरुषका बारेमा खासगरी आफ्ना श्रीमान् वा प्रेमीका बारेमा आफूलाई सबै जानकारी भएको भ्रममा हुन्छन् तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । महिलाहरूले पुरुषका बारेमा थाहा पाएँ भनी सोचेका कतिपय कुरा भ्रमपूर्ण हुन्छन् वा ती रहस्यले भरिएका हुन्छन् ।
पुरुषलाई आफूअनुकूल बदल्ने सपना देखिएको छ भने त्यस्तो सपना देख्न छोड्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ किनभने पुरुषहरू त्यति सजिलै परिवर्तन हुँदैनन् । आफ्नो सौन्दर्य, सीप, व्यक्तित्व, यौनक्षमता आदि जेसुकै प्रयोग गरेर रिझाउन खोजे पनि पुरुषहरू हो मा हो मिलाउनेभन्दा बढी केही गर्दैनन् र
कतिपय पुरुष स्वभावैले महिलालाई दुस्ख दिने, मारपिट गरेर आनन्द लिने खालका हुन्छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई आफू शक्तिशाली भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले बारम्बार उनीहरू त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोर्‍याउँछन् ।
आफ्नो पुरुष साथी पनि त्यस्ता छन् भने उनलाई मनोचिकित्सककहाँ लगेर उपचार गराउनुपर्छ । अनेक उपायबाट पनि कुनै समाधान ननिस्किए सम्बन्ध तोड्नुमै भलाइ हुन्छ ।
पुराना विचारका पुरुषलाई रेस्टुराँको बिल आफैंले तिर्न मन लाग्छ तर हिजोआजका केटाहरू केटीले बिल तिर्दा वा बाँडेर तिर्दा औधी खुसी हुन्छन् । नारी साप्ताहिकबाट
यो बर्षको बाला चतुर्दशी इतिहासकै दुर्लभ : पशुपतिलगायत शिवालयमा एकाबिहानै जे देखियो [८ तस्विर]